राष्ट्रपतिलाई संसदमै सांसदले 'महारानी' भनेपछि
काठमाडौं, १२ जेठ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि संसद्मा चलेको छलफलमा सांसदहरूको उपस्थिति न्यून रहेको बारे नयाँ पत्रिकाले शुक्रबार ‘गम्भीर बहस : रित्तो संसद्’ शीर्षकमा मुख्य समाचार छाप्यो । सो समाचार प्रकाशित भएको जानकारी गराउँदै सभामुख कृष्णबहादुर महराले शुक्रबारको संसद् बैठकमा सांसदहरूलाई सचेत गराएका छन् ।
उनले भने, ‘माननीयज्यूहरू बैठकमा माननीयहरूको न्यून उपस्थितिबारे केही पत्रपत्रिकामा समाचार प्रकाशित भएको छ । म यहाँहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’ संसद् बैठकमा अधिकांश सांसद पुगेर हाजिरी गर्ने र फर्किहाल्ने प्रवृत्ति बढेपछि संसद् बैठकका अधिकांश कुर्सी प्रायः खाली हुने गरेका छन् ।
केही सांसदले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई सरकारले महारानी बनाउन लागेको भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि सभामुखले त्यो शब्द हटाउन समेत निर्देशन दिएका छन् । सरकारको प्रतिनिधि समयमै उपस्थित नहुँदा संसद् बैठक समयमा प्रारम्भ हुन नसकिरहेको तर्फ समेत सभामुखले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।
विमल पोदारपछि अब दिपक मल्होत्रामाथि नजर
पूर्वपदाधिकारीलाई यस्तो सुविधा: मासिक भत्तादेखि कर्मचारीसम्म !
सट्टेबाजको रकम दाउदको खल्तीमा !
असारे विकास : दुई महिनाको खर्च तीन दिनमै !
द्वन्द्वकालीन मुद्दामा मेलमिलापमुखी कानुनको तयारी
अब चीनले माथिल्लो मर्स्याङ्दी-२ बनाउने
महासमिति बैठकमा केन्द्रित हुँदै काँग्रेस
गद्दी बैठक भोगचलनमा आउने
ट्रम्पले फेरि भने – उत्तर कोरियाबाट अझै खतरा
कुवेतमा मदिरा बनाउँछन् नेपाली !
९० दिनमा ६८ कानुन बन्नैपर्ने बाध्यताः कुन कुन काुनन बन्दैछ ?